Ny ala manga dia mahery fo momba ny toetrandro
Ny ala honko, ny ahitra ary ny heniheny masira dia maka sy mitahiry gazy karbonika be dia be ao anaty dobo voajanahary - fantatra amin'ny anarana hoe karbaona manga. Ireo toeram-ponenana ireo dia tena ilaina amin'ny jono sy ny tontolo iainana hafa anisan'izany ny haran-dranomasina. Tena zava-dehibe ho an'ny mponina amorontsiraka ihany koa izy ireo, miaro ny morontsiraka amin'ny fiakaran'ny oram-baratra sy ny fiveloman'ny jono.
Ny fiarovana sy ny famerenana amin'ny laoniny ireo fonenan'ny karbaona manga ireo, vahaolana ara-toetr'andro voajanahary, dia fomba iray azo anampiana amin'ny fisorohana ny fahasimban'ny toetr'andro mampidi-doza. Ary azo alaina ho antsika izany amin'izao fotoana izao.
Ny ala honko dia iray amin'ireo toeram-ponenana be karbaona indrindra eto an-tany, afaka mitahiry gazy karbonika avo folo heny isaky ny hektara noho ny ala tropikaly mahazatra. Ireo antsoina hoe ala manga ireo dia tena ilaina amin'ny fanatrarana ny fisintonana karbônina lehibe izay tena ilaina raha tiantsika ny hamerana ny hafanan'ny tany ho 1.5C.
Ny ala honko mahasalama dia sakana voajanahary izay mamonjy aina sy miaro ny fotodrafitrasa amin'ny oram-baratra mahery vaika sy ny fiakaran'ny ranomasina. Manohana jono manan-danja koa izy ireo, mamelona ny fiainana andavanandron’ireo mponina amorontsiraka an-tapitrisany maro. Na izany aza dia manohy ny fandripahana ala honko haingana kokoa noho ny karazana ala rehetra eto an-tany isika. Manodidina ny 19% amin'ny etona maneran-tany avy amin'ny fandripahana ala izy ireo ankehitriny.
Ny Blue Ventures dia nitarika ny sasany amin'ireo tetikasa karbaona manga voalohany eran-tany ho modely mahomby hanampiana ireo vondrom-piarahamonina miaro ny honko. Manitatra ireo tetikasa ireo any amin'ireo firenena manankarena honko any Afrika sy Azia izahay ankehitriny.
Rehefa mamerina sy miaro ny ala honko ny vondrom-piarahamonina, dia mampiasa fomba matanjaka, mifototra amin'ny angona isika mba handrefesana, hanome lanja ary hanaraha-maso ny karbaona manga azo. Ary amin'ny alàlan'ny fanangonana tetikasa marobe sy famoronana tsena mangarahara ho an'ny karbaona manga, dia manome fantsona mivantana sy ara-drariny ho an'ny famatsiam-bola momba ny toetrandro ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka.
Honko sy ny krizin'ny toetr'andro
Ala manga eto Madagasikara
Ny ala honko eto Madagasikara dia manohana ny fahasamihafan'ny zavamananaina an-dranomasina manan-danja eran-tany, ary manohana ny fivelomana sy fanjonoana nentim-paharazana amin'ireo vondrom-piarahamonina amorontsiraka marefo indrindra eran-tany. Mihavery anefa izy ireo, indrindra noho ny fiotazana hazo sy saribao tsy ara-dalàna amidy eny an-toerana sy any an-toerana.
Tamin'ny 2019 izahay nanangana ny tetikasa karbaona manga voalohany teto Madagasikara, manome hery ny vondrom-piarahamonina hitahiry sy hamelona ala mihoatra ny 1,200 ha ny ala honko. Ny tetikasa, fantatra amin'ny anarana hoe Tahiry Honko (izay midika hoe 'mitahiry honko' amin'ny fitenim-paritra Vezo), dia misoroka ny famoahana gazy karbonika mihoatra ny 1,300 taonina isan-taona.
Misoratra anarana amin'ny Plan Vivo standard, Tahiry Honko dia hanome fidiram-bola tsy tapaka amin'ny alàlan'ny fivarotana crédit karbonika hanohanana ny ezaka fiarovana eo an-toerana mandritra ny roapolo taona manaraka. Ny famatsiam-bola ihany koa dia manampy amin'ny famatsiam-bola amin'ny fampandrosoana ny vondrom-piarahamonina ao anatin'izany ny fananganana fotodrafitrasa tena ilaina ary ny fanohanana ny fitsaboana sy ny fanabeazana.
Ny tetikasa dia manambatra ny jono honko sy ny fitantanana ny ala ao anatin'ny rafitra iray mirindra, tohanan'ny fivelomana hafa maharitra, anisan'izany ny fiompiana kôkômbra sy ny ahidrano ary ny fiompiana tantely honko.
Io fomba fiasa io dia manome fahafahana tsara kokoa ny fiainana an-dranomasina sy ny mpanjono hiatrika ny adin-tsaina sy ny fahatafintohinana vokatry ny fahapotehan'ny toetrandro. Ny sakafo sy ny fivelomana azo antoka kokoa, ny fampivoarana ny fidiram-bola sy ny tahirim-bola, ary ny fidirana tsara kokoa amin'ny serivisy fototra ao anatin'izany ny tolotra ara-pahasalamana dia mahatonga ny vondrom-piarahamonina mpanjono amoron-tsiraka hahazaka kokoa ny fiovaovan'ny toetr'andro.
Vakio ny fehin-kevitry ny politika karbaona manga
Famantarana ny sakana karbaona manga manga
Hevitra lehibe ho an'ny mpanao politika
Google Earth Engine Mapping Methodology
GEM: Fanomezana fahafahana ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka hampiasa ny sandan'ny Blue Carbon
Fampiasana ny teknolojia dizitaly sy ny famakafakana angona rahona mba hanaovana sarintany sy hanaraha-maso ny fiovan'ny ala honko ary hanafaingana ny tetikasa karbaona manga tarihin'ny vondrom-piarahamonina.